Gudigga qaban qaabada Doorashadda Galmudug oo soo dhaweyn loogu sameeyey Dhuusamareeb – Radio Muqdisho
Gudigga qaban qaabada Doorashadda Galmudug oo soo dhaweyn loogu sameeyey Dhuusamareeb
Munaasabad lagu soo dhaweynayey Gudigga qaban qaabada Doorashadda Galmudug oo shalay magaalada Dhuusamareeb gaaray ayaa xalay lagu qabtay magaaladaas.
Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay qeybaha kala duwan ee Bulshada kuwaas oo sheegay inay lashaqeyn doonaan Gudigaas oo dhawaan soo magacowday Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xuukamadda Federaalka Soomaaliya.
Xubno kamid ah Gudigga qaban qaabada Doorashadda Galmudug ayaa Bulshada ka codsaday inay si-dhow ula shaqeeyaan iyaga oo sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabi doonaa shaqaddii loo igmaday.
Bulshadda Galmudug ayaa siweyn u sugeysa Dhismaha Dowlad Goboleedka Galmudug oo muhiim u ah shaqooyin badan oo loo qaban lahaa qeybaha kala duwan ee dadka deegaanka.
Suxufiyiin ka socda Qaaradda Afrika oo Tabbabar uga furmay dalka Turkiga.”SAWIRRO”